Nicotinamide Adenine Dinucleotide (53-84-9) ထုတ်လုပ်သူ - Phcoker ကိုဝယ်ပါ
နီကိုတီနိုက် adenine dinucleotide (53-84-9)
Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) သည်သက်ရှိဆဲလ်အားလုံးတွင်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကိုကူညီပေးသော cofactor တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပုံစံနှစ်မျိုးဖြင့်တည်ရှိသည်။
Nicotinamide adenine dinucleotide (53-84-9) ဗီဒီယို
ထုတ်ကုန်အမည် နီကိုတီနိုက် adenine dinucleotide (NAD +)
ဓာတုအမည် Nadide; coenzyme ၁; beta-NAD; beta-nad +; beta-diphosphopyridine nucleotide; diphosphopyridine ဘေ့; Enzopride;
CAS အရေအတွက် 53-84-9
မော်လီကျူးအလေးချိန် 663.4 g / mol
အရည်ပျော်မှတ် 160 ° C (320 ° F; 433 K)
Sသိုလှောင်အပူချိန် 2-8 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
ပျော်ဝင် H2O: 50 mg / mL
လြှောကျလှာ ကျန်းမာရေးအစားအစာ၊ အလှကုန်ပစ္စည်း၊
ဘာဖြစ်သလဲ Nicotinamide adenine dinucleotide(NAD +)?
Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) သည်သက်ရှိဆဲလ်အားလုံးတွင်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကိုကူညီပေးသော cofactor တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အောက်စီဂျင် (NAD +) ပုံစံနှစ်မျိုးဖြင့်တည်ရှိပြီးလျော့နည်းသည် (NADH) ။
Coenzyme NAD + ကို NID ၏ဓာတ်တိုးပုံသဏ္formာန်ကို ၁၉၀၆ ခုနှစ်တွင်ဗြိတိသျှဇီဝဓါတုဗေဒပညာရှင် Arthur Harden နှင့် William John Young တို့ကပထမဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ NAD + ကိုဇီဝဖြစ်စဉ်လမ်းကြောင်းနှစ်ခုမှဖန်တီးပြီး၊ de novo amino acids လမ်းကြောင်းမှထုတ်လုပ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် NAD + ၏ကယ်တင်ခြင်းလမ်းကြောင်းသို့ကြိုတင်ဖွဲ့စည်းထားသောအစိတ်အပိုင်းများ (ဥပမာနီကိုတင်းနိုက်ကဲ့သို့) ကိုပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော pyridine nucleotide ဖြစ်ပြီး oxidative phosphorylation နှင့် ATP ထုတ်လုပ်မှု၊ DNA ပြုပြင်ခြင်း၊ ဗီဇဖော်ပြမှု၏ epigenetic Regulation, intracellular calcium signaling နှင့် Immunological function တို့ပါ ၀ င်သောအဓိကဆယ်လူလာလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်မရှိမဖြစ် cofactor နှင့်အလွှာတစ်ခုဖြစ်သည်။
NAD + သည်ဇီဝဓာတ်တိုးခြင်း၏အဓိကအီလက်ထရွန်လက်ခံမော်လီကျူးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အခြားမော်လီကျူးများမှအီလက်ထရွန်များကိုလက်ခံပြီးလျှော့ချသည်။ ၎င်းသည် hydride transferase ၏ coenzyme နှင့် NAD (+) polymerase ကိုစားသုံးသည့်အလွှာတစ်ခုအနေဖြင့်လည်းလုပ်ဆောင်ပြီးလျှော့ချβ-nikotinamide adenine dinucleotide (NADH) နှင့်အတူ coenzyme redox pair တစုံကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ NAD (R) သည် ADP-A ရှိ ADP-ribose အလှူရှင်ယူနစ်ရိုင်ဗိုစီလိုင်ယာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် cyclic ADP-ribose (ADP-ribosyl cyclase) ၏ရှေ့ပြေးလည်းဖြစ်သည်။
ဆဲလ်ဇီဝြဖစ်စဉ်တွင် oxidant အဖြစ် NAD (R) သည် adadosine diphosphate (ADP) -ribose transfering တုံ့ပြန်မှုများတွင် diadenylate (ADP-ribose) polymerase နှင့်အခြားအင်ဇိုင်းများဖြစ်စဉ်များတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်ဆီးချိုရောဂါ၊ ကင်ဆာနှင့်အခြားအသက်အရွယ်နှင့်ဆက်နွယ်သောရောဂါများကိုကာကွယ်ရန်သို့မဟုတ်လျှော့ချရန် NAD ကိုကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်သည်။ NAD + boosters များသည် mitochondria ကိုပြန်လည်နုပျိုစေရန်နှင့်အိုမင်းခြင်းရောဂါများကိုတိုက်ဖျက်ရန် resveratrol ကဲ့သို့သောဖြည့်စွက်ဆေးများနှင့်အတူတကွအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
Nicotinamide adenine dinucleotide(NAD +) အကျိုးခံစားခွင့်များ
ထိရောက်သော oxidant အနေဖြင့် Nicotinamide adenine dinucleotide သည်လူတို့၏လုပ်ဆောင်မှုများတွင်ကောင်းမွန်သောအကျိုးကျေးဇူးများကိုပြသသည်။
brain ဦး နှောက်၏လုပ်ဆောင်မှု၊
global ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ sirtuin လှုပ်ရှားမှုကိုမြှင့်တင်ရန်၊
anti antioxidant ထိရောက်မှုကိုတိုးတက်စေခြင်း၊
balance မျှတမှု၊ စိတ်ခံစားချက်၊
Nicotinamide adenine dinucleotid သည်တီဘီရောဂါကို Mycobacterium tuberculosis ကြောင့်ဖြစ်သောကုသမှုတွင်အသုံးပြုသော isoniazid ဆေး၏တိုက်ရိုက်ပစ်မှတ်ဖြစ်သည်။ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုအနေဖြင့် NAD မှတစ်ပတ်ခန့်ကြွက်များသည်နျူကလီးယား - mitochrondrial ဆက်သွယ်ရေးကိုတိုးတက်စေခဲ့သည်။
ထို့အပြင် Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD +) တွင်လည်းနှလုံးပိတ်ဆို့ခြင်း၊ sinus node function နှင့် anti-fast စမ်းသပ်သည့်ပုံသဏ္asာန်များကိုကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းနှင့်ကုသမှုများပြုလုပ်သည်။ nicotinamide သည်နှလုံးခုန်နှုန်းနှင့် verapamil ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ntricular block ကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေသည်။
Nicotinamide adenine dinucleotide(NAD +) လျှောက်လွှာ:
Diagnostic ဓါတ်ကူပစ္စည်းကုန်ကြမ်း, သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနစမ်းသပ်ချက်။
နောက်ထပ် Nicotinamide adenine dinucleotide(NAD +) သုတေသန
NAD + နှင့် NADH ကို အသုံးပြု၍ သုံးသောအင်ဇိုင်းများသည်ဆေးဝါးဗေဒနှင့်အနာရောဂါကုသမှုဆိုင်ရာသုတေသနနှစ်ခုလုံးတွင်အရေးကြီးသည်။ coenzyme NAD + သည်မည်သည့်ရောဂါအတွက်မဆိုကုသမှုတစ်ခုအနေဖြင့်လက်ရှိအသုံးပြုနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ သို့သော်၎င်းသည်အယ်လ်ဇိုင်းမားနှင့်ပါကင်ဆန်ရောဂါကဲ့သို့သော neurodegenerative ရောဂါများကုထုံးတွင်အသုံးပြုရန်အလားအလာရှိကြောင်းလေ့လာလျက်ရှိသည်။
Belenky P၊ Bogan KL, Brenner C (2007) ။ “ ကျန်းမာရေးနှင့်ရောဂါတို့တွင် NAD + ဇီဝြဖစ်ပျက်မှု” (PDF) ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်းထဲကဓာတုပစ်စညျး။ သိပ္ပံ 32 (1): 12- Doi: 10.1016 / j.tibs.2006.11.006 ။ PMID 17161604. မူရင်း (PDF) မှ4ခုနှစ်ဇူလိုင်လ 2009 ရက်နေ့တွင်မော်ကွန်းတင်ပြီး 23 ဒီဇင်ဘာလ 2007 ရယူရန်။
Todisco S, Agrimi, G, Castegna A, Palmieri F (2006) ။ "Saccharomyces cerevisiae တွင် mitochondrial NAD + Transporter ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း" ။ ဂျေ Biol ။ Chem ။ 281 (3): 1524- Doi: 10.1074 / jbc.M510425200 ။ PMID 16291748 ။
လင်း SJ, Guarente L ကို (2003ပြီ 15) ။ "Nicotinamide adenine dinucleotide, ကူးယူခြင်း, အသက်ရှည်ခြင်းနှင့်ရောဂါ၏ဇီဝဖြစ်စဉ်ကိုထိန်းညှိ" ။ ကြက်သွန်ဖြူ။ ထင်မြင်ချက်။ ဆဲလ် Biol ။2(241): 10.1016- Doi: 0955 / S0674-03 (00006) 1-12648681 ။ PMID XNUMX ။
Williamson DH, Lund P, Krebs HA (1967) ။ ကြွက်အသည်း၏ cytoplasm နှင့် mitochondria တွင်အခမဲ့နီကိုတင်းနိုက် - အက်ဒီနင်ဒိုင်နူကုန်းတိတ်၏ redox သည်။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ဂျေ 103 (2): 514- Doi: 10.1042 / bj1030514 ။ PMC 1270436. PMID 4291787 ။
Foster JW၊ Moat AG (၁၉၈၀ မတ် ၁ ရက်) ။ "Nicotinamide adenine dinucleotide biosynthesis နှင့်ပိုးမွှားစနစ်များအတွက် pyridine nucleotide သံသရာဇီဝြဖစ်" Microbiol ။ ဗျာ 1 (1980): 44- PMC 1. PMID 83 ။
ပြင်သစ် SW နာတာရှည်အရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းသည် sirtuin ၏ deacetylase လှုပ်ရှားမှုအတွက်လိုအပ်သောNAD⁺အဆင့်ကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်အသည်းနှင့်အခြားအင်္ဂါများကိုထိခိုက်စေသည်။ Exp Mol Pathol ။ 2016 ;ပြီ; 100 (2): 303-6 ။ Doi: 10.1016 / j.yexmp.2016.02.004 ။ Epub 2016 ဖေဖော်ဝါရီ 16 PMID: 26896648 ။
ကိန်း AE, Sinclair DA ။ ဇီဝဖြစ်စဉ်နှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ကုသရေးတွင် Sirtuins နှင့် NAD + တို့ဖြစ်သည်။ Circ Res ။ 2018 စက်တင်ဘာ 14; 123 (7): 868-885 ။ Doi: 10.1161 / CIRCRESAHA.118.312498 ။ PMID: 30355082. PMCID: PMC6206880
Coenzyme Q10 အမှုန့် (303-98-0)
NADP disodium ဆား (၂၄၂၉-၆၀-၂)
နီကိုတီနိုက်ရိုင်ဘိုဇိုက်ကလိုရိုက် (NR-CL) (23111-00-4)